Antony lehibe 13 mahatonga ny lehilahy hisintona (+ Izay azonao atao hanampiana) - Fifandraisana
Antony lehibe 13 mahatonga ny lehilahy hisintona (+ Izay azonao atao hanampiana)
Manalavitra anao ny lehilahyo.
Miala ao aminy ny tenany.
Manontany tena ianao hoe maninona…
Azo antoka fa liana izy.
Raha ny marina dia azonao antoka tsara fa tiany ianao mihoatra ny avelany.
Ka maninona izy no manao zavatra lavitra tampoka?
Fa maninona, rehefa lasa akaiky anao izy, dia mihemotra ankehitriny?
Izay no antenainay hamaly amin'ity lahatsoratra ity.
Hizaha izay azonao atao koa isika rehefa mitranga izany sy ny fomba fihetsika rehefa / raha miverina aminao izy.
Voalohany, tsara ny manamarika fa tsy ny lehilahy rehetra no manao an'io. Ary misy vehivavy manao toy izany koa.
Ary tsy eo am-piandohan'ny fifandraisana ihany no mitranga - ny tovolahy indraindray hisintaka mandritra ny fotoana kelikely fifandraisana manolo-tena .
Andao hojerentsika ny antony sasany mahatonga ny lehilahy hiala amin'ny vadiny.
13 Antony mahatonga ny lehilahy hisintona
Mandeha tsara ny raharaha. Manakaiky lehilahy ianao ary toa mamaly.
Inona no fiovana tao an-tsainy ka nahatonga azy nanalavitra tampoka anao sy ny fifandraisana?
1. Matahotra ny fihetseham-pony izy.
Angamba ny antony lehibe mahatonga ny lehilahy hisintaka aloha eo amin'ny fifandraisana dia satria matahotra ny zavatra tsapany izy ireo.
Na nitady fitiavana izy ireo na tsia rehefa nifanena taminao izy ireo, ny fahatsapana ho latsaka tampoka ho an'ny olona iray dia feno tsy fahatokisana.
Ny lehilahy sasany dia mahita fa sarotra ny mandrindra izany.
Ireo lehilahy ireo dia tsy mifandray amin'ny fihetseham-pony toy ny hafa, ary tsy ampitahaina amin'ny ankamaroan'ny vehivavy.
Mety ho hitan'izy ireo fa tena mahafinaritra ny fieritreretana ny fifandraisana iray, saingy ny fihetseham-po miaraka aminy dia sarotra kokoa ho azy ireo ny mihodina.
Noho izany dia mandany fotoana kely izy ireo hiasana amin'ireo fihetsem-po ireo.
Ihany, angamba tsy mampita izany aminao izy ireo. Vao mainka mihasarotra ara-batana sy ara-pihetseham-po izy ireo.
2. Izy dia matahotra fanoloran-tena .
Ny lehilahy sasany dia mahita izany hevitra izany mijanona ho mahatoky amin'ny olona tokan-tena tena vahiny.
Angamba mbola tanora izy ireo ary te ‘hilalao an-tsaha’ alohan'ny hipetrahany.
Angamba ankafizin'izy ireo ny fihenjanana am-piandohan'ny fikorontanan-pitiavana sy ny 'fanenjehana' ny fitiavam-pitiavana, fa tsy izay ho avy aorian'izany.
Ny lehilahy iray dia mety tsy nanana fifandraisana matotra lava ary tsy nahalala ny dikan'izany - ka nisintona fotsiny izy ary nanakana azy tsy hahatratra izany dingana izany.
Ny fitaizana azy dia mety hanana anjara andraikitra ihany koa, indrindra raha nisaraka ny ray aman-dreniny nandritra ny fahazazany.
3. Mifikitra amin'ny fahaleovany tena izy.
Ny fifandraisana dia mitaky fanoloran-tena, fotoana ary ezaka. Tsy azo ihodivirana ny fanalavirana anao amin'ny zavatra sasany ankafizinao ankehitriny.
Ho an'ny lehilahy sasany, ity fizotran'ny roa ity dia lasa iray (ara-panoharana, farafaharatsiny) maneho ny fahaverezan'ny fahalalahana sy fahaleovan-tena.
Ary raha misy lehilahy manome lanja manokana ireo zavatra ireo, dia mety hiala amin'ny fangatahana hifikitra amin'izy ireo izy.
Tsy mahatsiaro ho nafana fo na inona na inona aho
Marina indrindra izany ho an'ireo lehilahy izay tsy nitady fifandraisana tamim-pahavitrihana rehefa nihaona taminao.
Azo antoka fa mety mankafy ny fotoana laniny miaraka aminao izy ireo, saingy mety maniry fatratra ny fotoana hahafahany manao izay tiany izy ireo, rehefa maniry koa izy ireo.
Mety hisintaka izy ireo ary handany fotoana bebe kokoa mba hahalalany izay tena lanjan'ny fony indrindra.
4. Matahotra ny haratra izy.
Ny fifandraisana taloha dia mamela ny ratra ara-pihetseham-po sy ny entana izay mahatonga ny lehilahy hanalavitra ny tenany alohan'ny hanaovany ny fony ary mety hitera-doza kokoa.
Raha nisy mpiara-miasa taminy nisaraka taminy taloha izy rehefa tia azy ireo, dia mety hahatonga azy hatahotra hiaina fanaintainana toy izany indray.
Azo antoka fa tsy vitan'ny lehilahy ihany izany. Vehivavy maro no afaka mahatsapa toy izany koa.
Amin'ity tranga ity, ny fisintahana dia endrika rafitra fiarovana natao hiarovan-tena.
Andao hatrehana izany, rehefa eo izy ireo raiki-pitia , afaka manao zavatra hafahafa isan-karazany ny olona. Indraindray izany dia miseho ho toy ny sabotage-tena.
Tsy midika izany hoe tsy manana fihetseham-po aminao izy, fa midika kosa izany fa tsy azony antoka ny fomba fihetsika mifanaraka amin'ireo fahatsapana ireo.
5. Somary nihanahery vaika taminy izany rehetra izany.
Ny fifandraisana sasany dia manomboka amin'ny aotra ka hatramin'ny enimpolo haingana be.
Araka izay itiavany an'izany ao anaty fiarany dia mety tsy dia variana loatra aminy izy rehefa miresaka sipa.
Ny fahatsapana misy eo aminao sy ny fomba andanianao fotoana be dia be dia mety ho somary ela loatra.
ny ny fifandraisana mety ho lasa haingana loatra ho azy.
Ka manosika azy hiverina izy ary misintona kely toy ny fanaovany ny freins amin'ny zavatra.
Mety hahazo aina kokoa izy amin'ny fakana zavatra miadana.
6. Mila mamerina mamehy ny maha-lehilahy azy izy.
Manova olona ny fifandraisana amin'ny lafiny iray. Amin'ny tranga lehilahy, dia mazàna manamboatra azy ireo izany marefo kokoa ary maneho fihetseham-po bebe kokoa (na dia tsy matetika aza).
Mety hahatsapa ho tsy dia mahazatra loatra ny lehilahy ity ary mety hiady amin'izany ny fihetsika voajanaharin'izy ireo.
Mety hahatsapa izy ireo fa mila misintona mba hamerenany ny ‘batterin-dry zareo’ manao ireo karazan-javatra ankafizin'ny lehilahy.
Mety hihemotra amin'ny toerana mampionona sy maha-olona izy ireo - ara-bakiteny sy ara-panoharana.
Ity toerana ity dia matetika antsoina hoe 'zohy lehilahy' izay anaovan'ny lehilahy zavatra mahalahy, matetika miaraka amin'ny lehilahy hafa.
Eo am-piandohan'ny fifandraisana dia mety hidika izany fa mandany fotoana bebe kokoa amin'ny toerany izy tsy misy anao.
tsy mahatsapa manokana amin'ny fiarahana
Na mety hiantso ny namany lahy izy mba hiroboka amin'ny fialamboly stereotypically anjakan'ny lehilahy toy ny fanatanjahan-tena, lalao video, na fananana labiera na roa.
Ity farany dia mahazatra amin'ny fifandraisana efa miorina mafy izay ipetrahan'ny mpivady ary ny lehilahy dia tsy manana toerana misaraka hiantsoana ny azy.
Na inona na inona, ity fotoana lavitry ny vehivavy amin'ny fiainany ity dia mamela azy hifandray indray amin'ny ampahany amin'ny maha-izy azy izay mety ho 'malemy' amin'ny fiarahana.
7. Nahazo fihenjanana hafa izy teo amin'ny fiainany.
Rehefa misintona ny tovolahy dia indraindray tsy misy ifandraisany aminao na amin'ny fiarahana izany.
Misintona izy satria manana adin-tsaina be amin'ny lafiny hafa amin'ny fiainany.
Angamba manontany be azy ny lehibeny ary, satria olona be fatra-paniry laza izy, dia tsy te hamela azy ireo.
Na mety manana olana kely amin'ny fianakaviany izy ary miteraka fientanam-po izany.
Mety hiatrika olana ara-pahasalamana izay tsy fantatrao izy.
Ary misy ny vintana fa manana olana ara-bola izy.
Raha mbola eo am-piandohana ny fiarahana dia mety tsy hahatsapa ho afaka na hitebiteby aminao izy.
Mety matahotra izy sao hampatahotra anao fotsiny ireo zavatra ireo na hahatonga anao hisalasala ny amin'ny ho avin'ny fiarahana.
Ka manafina azy ireo izy ary manalavitra kely ny tenany mba tsy hahalalanao azy.
8. Mahatsapa izy tsy mendrika fitiavana sy fahasambarana.
Ny olona sasany dia manana ny fiheveran-tena ambany sy ny fiheveran-tena kely ka tsy azony tsotra izao ny antony hitiavan'izy ireo azy.
Angamba ny bandy tovolahy toa anao.
Mety hisintona izy satria azony antoka fa tsy tianao izy ary tsy mendrika ny fahasambarana mety ho tsapany rehefa miaraka aminao izy.
Mety hitondra takaitra ara-pihetseham-po na enta-mavesatra izay tsy hitany taloha amin'ny resaka fifandraisanao sy ny ho avy miaraka.
Raha ny marina, ny zavatra matotra kokoa manelanelana anao, dia vao manomboka miahiahy ny tenany ho mpiara-miasa mendrika sy olon-tiana izy. Raha nanomboka nisintaka izy taorinan'ny nanazavanao tsara ny fihetseham-ponao taminy dia mety izany no antony.
9. Manahy ny hamoy ny maha izy azy izy.
Talohan'ny nifaneraseranao dia mpitovo (angamba) mpitovo izy nandritra ny fotoana kelikely, ary mety ho elaela.
Nandritra ny androny mpitovo, dia namelatra ny maha izy azy manodidina izany fifandraisana manokana izany izy.
Na tena tiany ny mpitovo na tsia dia nifandray tamin'io izy ary nahalala ny fomba hiainana ny fiainany tahaka an'io olona io. Nanana fanazaran-tena sy fialamboly ary olona efa hitany matetika izy.
Ankehitriny eo amin'ny sehatra ianao ary tsy mpitovo intsony izy (na efa antomotra ny fahatsinjovan-javatra rehefa mihamatotra ny raharaha), dia mety hiala amin'ny fiainana izy sy ilay olona taloha satria manahy izy fa tsy maintsy milavo lefona zavatra sasany izay tsy tiany hafoiny.
Angamba mahatsapa mahazo aina sy mahazatra azy ny fiainany taloha ka manahy izy fa ho very izany.
10. Mampifangaro ny filan'ny fitiavana izy… ary manjavona.
Raha niaraka tamin'ity lehilahy ity ianao nandritra ny fotoana kelikely ary vao nanomboka nisintona anao izy izao, mety ho efa manomboka mihalefaka ilay fifandraisana ara-batana mafy tsapany aminao.
Ampahany amin'ny fivoaran'ny ara-dalàna ny fifandraisana izany, saingy mety hampifangaro izany raha tsy fantatrao ny tena dikan'izany.
Mety ho diso ny filan'ny fitiavana. Ary ankehitriny fa miala tsimoramora ny filan-dratsy, nefa azo antoka, resy lahatra ny tenany fa tsy mifanitsy ianareo satria ny fitiavana mbola tsy novolavola tanteraka hisolo ny filan'ny nofo.
Tratry ny angano izy fa tsy maintsy mahatsapa fahatsapana mahery vaika amin'ny olona iray ianao amin'ny fotoana rehetra raha hiasa ho mpivady ianao, raha ny marina dia mihena sy mivezivezy foana ny fahatsapana na dia amin'ireo fifandraisana tena mahafaly sy feno fanoloran-tena aza.
11. Be atao fotsiny izy.
Okay, ka mety hiteny ianao fa raha tena nikarakara anao izy dia hanao ny fotoana, fa tsy mora foana ny fiainana.
Raha manana fanoloran-tena lehibe hafa izy fa tsy vonona na tsy afaka milatsaka fotsiny izy dia mety tsy hahatsapa ho afaka hifanaraka aminao amin'ny fifangaroana.
Ny fisintomany dia mety tsy noho ny faniriany, fa noho izy tsy afaka mitazona ny fifandraisana nomerika sy ara-batana aminao.
Raha miasa roa izy, mizara fikarakarana zaza amin'ny sakaizany taloha, ary manampy amin'ny fikarakarana havana antitra, dia mety ho reraka fotsiny izy.
Mety ho tranga mahitsy izany, fotoana tsy mety… indrisy.
12. Mikaroka safidy hafa izy.
Raha mbola tsy nanaiky ny ho mpivady manokana ianao dia mety hahatsapa izy fa mbola mety ny mampiaraka olon-kafa.
famantarana ny fisakaizana iray
Ary, tsy azo ihodivirana, raha mandany fotoana amin'ny olon-kafa izy dia mandany fotoana kely kokoa aminao.
Tsy ny fanoloran-tena amin'ny fotoana mety hahitanao fahasamihafana ihany, fa eo amin'ny lafiny ara-pientanam-po koa. Raha mandinika ny zavatra tsapany ho an'ny hafa izy dia mety hihemotra kely aminao amin'ny heviny ara-pientanam-po.
13. Tsy mitovy aminao araka ny nieritreretanao azy izy.
Mety izany no antony mety amin'ny fifandraisana izay vaovao, saingy mety tsy liana toa ny eritreretinao izy.
Mety ho sarotra henoina izany, saingy maro ny lehilahy tsy dia tsara raha miresaka momba ny tena fihetseham-pony mandritra ny fotoana mampiaraka.
Ka tsy miresaka aminao ary manazava fa tsy te hanenjika zavatra lavitra kokoa izy ireo, fa manalavitra ny tenany fotsiny amin'ny fanantenana fa hahatratra izany fehin-kevitra izany irery ianao.
Mitroka, fa angamba nandositra soa aman-tsara ianao raha izao no izy.
Inona no hatao rehefa misy lehilahy misintona
Mety mahatsapa mahatsiravina rehefa misintona any aminy ny lehilahy, toy ny fandavana karazana.
Mety manontany tena ianao raha manandrana anao izy, saingy azo antoka fa tsy izany no izy.
Miasa amin'ny eritreriny sy ny fahatsapany fotsiny izy.
Ka inona no fomba tsara indrindra hanatonana ireo toe-javatra ireo?
Makà fomba fijery matihanina
Raha ity lahatsoratra ity dia afaka manampy anao hamantatra ny antony isintoman'ny lehilahy anao ary manome torohevitra momba ny fiatrehana izany dia tsy manam-paharoa ny anao sy ny toe-javatra misy azy.
Tsara matetika ny maka torohevitra manokana mifototra amin'izay tena mitranga eo amin'ny fiarahanareo. Ary ho an'izay, mety te hiresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana ianao (azo inoana fa ianao irery amin'ity tranga ity).
Fa aiza no ahafahanao mandeha miresaka olona? Safidy tsara ho an'ny maro ny fivoriana an-tserasera nomen'ny. Azonao atao ny miresaka amin'ny Internet na amin'ny alàlan'ny telefaona amin'ny manam-pahaizana manokana momba ireo raharaha ireo izay afaka mihaino anao ary manolotra fomba manokana hanandramana.
Indraindray, ny firesahana amina olona fotsiny dia afaka manasongadina fomba handrosoana sy hitondrana ny fitondran-tenan'ny lehilahy malala. hiresaka amin'olona izao.
Omeo toerana izy.
Amin'ny marina… mila izany ianao omeo toerana izy .
Tsy misy ny antony etsy ambony no voavaha raha manandrana misintona azy hiverina ianao ary manizingizina fa mandany fotoana bebe kokoa ianareo.
Mihataka izy satria izany no mahatsapa fa mety amin'izao fotoana ara-potoana marina izao.
Mety tsy ho fantany tsara ny antony, fa ny hiadiana amin'izany fanao ratsy izany dia mety hisian'ny fifandonana izay mety hahatonga ny zavatra ho ratsy kokoa ary mety tsy ilaina intsony.
Space, eny. Fahanginana, tsia.
Ny fanomezana toerana azy dia tsy midika hoe tokony hatsahatrao tanteraka ny endrika fifandraisana rehetra.
Tsy midika akory izany hoe tsy mahita azy.
Midika izany fanajana ny filàny hisaraka aminao.
Tokony handefa SMS azy ve ianao? Azo antoka, tsy olana izany.
Mety ho feno eritreritra sy fisalasalana ny sainy, saingy mety ho tiany ihany izany raha mijery azy indraindray ianao.
Fantaro fotsiny fa mety tsy dia be resaka izy na mamaly haingana dia haingana toy ny teo aloha.
Na dia mafy toy inona aza rehefa tena mitady azy ianao, dia mila manaja ny olona amin'ny fomba samihafa.
Ary matetika ny lehilahy dia mandrindra ny eritreriny sy ny fihetseham-pony amin'ny fomba hafa amin'ny vehivavy.
Raha ny mifankahita dia mbola azonao atao ny manoro hevitra ny hihaona, fa apetraho amin'ny fomba hahamety azy.
Lazao hoe, 'Raha afaka hariva ianao amin'ity herinandro ity dia tokony…”
Izany dia manome azy fotoana hisafidianana andro sahaza azy indrindra fa tsy hoe terena hanao andro iray izy.
dragon ball super daty fizarana voalohany
Ary miezaha hanao azy io ho zavatra heverinao fa hahazoany aina. Angamba tsy vonona ny hiresaka zavatra lava be izy, fa afaka mandray sarimihetsika na fampisehoana miaraka ianareo.
Izy io dia mitazona azy hanakaiky ary mampahatsiahy azy fa tsy miraharaha anao ianao nefa tsy mitaky fitakiana lehibe aminy ho mora tohina.
Na raha niara-nandany ny faran'ny herinandro ianao, dia azonao atao foana ny milaza fa manana drafitra mandritra ny iray andro ianao, saingy te hahita azy etsy ankilany… indray, raha afaka izy.
Izany dia mampihena ny hamafiny ary manome toky azy ny faran'ny herinandrony hanao izay tiany.
Mety havela ho sosotra ianao na diso fanantenana rehefa misintona izy fa miezaha mba tsy hitovy amin'ny fomba fanatonana azy.
Tsy ho mora izany. Mitovy amin'ny azy ny fihetseham-ponao.
Fa raha azonao atao, andramo ny mametraka ny tenanao amin'ny kirarony mandritra ny iray segondra.
Raha afangaro amin'ny fahatsapanao ianao, matahotra ny holavina, na mahita fa sarotra ny mifindra amin'ny fomba fiaina iray mankany amin'ny iray hafa, tsy tianao ve ny hitsaboana anao amin'ny fangoraham-po?
Tsy resaka fahamatorana izany na andraikitr'iza ny mitazona ny fifandraisana…
… Fa raha tianao izy ary mieritreritra fa manana governa fotsiny izy dia tsy manimba izany raha mijanona ho tsara sy tsara fanahy ary tsara fanahy aminy.
Raha mamaly ny fisintotany amin'ny alàlan'ny halaviranao koa ianao dia mety hitombo hatrany ny raharaha.
Tokony hasehonao azy fa, na inona na inona tolona anatiny mety ananany, dia eo ianao hanohana azy.
Raha afaka manao an'io ianao dia mety hanokatra kely fotsiny anao momba ny zavatra eritreretiny sy tsapany izy.
Tazomy ho azy roa ihany.
Raha vao nahita azy vetivety ianao dia fanerena be dia be aminy ny manokana fotoana miaraka amin'ny namanao na fianakavianao.
Ary toy izany koa ny fandanianao fotoana miaraka aminy sy ny namany na ny fianakaviany.
Ny 'fihaonana sy fiarahabana' iray manontolo dia raharaha lehibe. Mahatonga azy ireo hahatsapa ho ofisialy sy matotra kokoa.
Mety ho vonona amin'izany ianao, fa mety tsy ho izany.
Esory ny fanerena. Tazomy ho azy roa ihany ny raharaha raha afaka. Hahatsapa ho mahazo aina izy ary azo inoana fa hiala sasatra ao amin'ny orinasanao.
Izao no tadiavinao. Raha mahatsapa milamina izy dia tsy dia hahatsapa intsony ny filàna misintona.
Ho avy ny fotoana hahatongavana ho ampahany amin'ny fiainany lehibe kokoa. Aza manery fotsiny hanery ny olana haingana.
Asehoy ny fanohananao ireo filany hafa.
Niresaka tetsy ambony izahay momba ny fahatahoran'ny lehilahy anao tsy hanana fahaleovan-tena ary ny ampahany amin'izany dia mihena amin'ireo zavatra hafa mahaliana azy amin'ny fiainana.
Angamba izy efa matihanina asa na manomboka ny orinasany.
Angamba izy mandray ny hazakazahany hazakazaka matotra ary manolo-tena amin'ny fitondrana fanazaran-tena.
Sa te handeha any amin'ny toerana lavitra indrindra eran'izao tontolo izao izy nefa tsy misy fameperana?
Raha azonao atao ny mandresy lahatra azy fa tsy manandrana manaisotra ireo zavatra ireo aminy ianao dia tsy hanana antony hisintahana izy noho izany.
Manokàna fotoana anontaniana azy momba ny filany sy ny toetrany. Miezaha hahafantatra izay fotoana nanolorany tena ary manaja ireo.
Aza hadino ny zavatra tiany hahatongavana ary ataovy mazava tsara fa tianao ny fananany tanjona sy nofy mazava ary tena tianao ny hahita azy mahomby.
Aza mitsahatra miasa.
Rehefa misintona ny lehilahy iray dia miezaha tsy hibanjina ny antony mahatonga na manery azy be loatra.
Vehivavy sarobidy ianao ary tsy misy lehilahy mamaritra ny maha-ianao anao.
Noho izany dia ataovy izay hahasosotra anao amin'ny namanao, fianakavianao, na fialam-boly ataonao ary ankafizo ny tenanao araka izay azonao atao.
Tadidio fa mbola afaka mifampiresaka aminy ianao, ary ny filazanao aminy fa manana diary feno dia hanamafy aminy fa manome lanja ny fahaleovantenanao koa ianao.
sarin'ny vadin'i dolly parton
Raha misy lehilahy mahita fifandraisana amin'ny ho avy izay itazanan'ny olona tsirairay ny sakaizany sy ny zavatra mahaliana azy dia hamaly ny sasany amin'ireo ahiahiny izany.
Ahoana no hataoko rehefa miverina izy?
Raha tena misy lehilahy mahatsapa anao ary maniry anao amin'ny fiainany dia hiverina aminao ihany izy amin'ny farany.
Na dia mbola nahita azy aza ianao, nandefa hafatra taminy, na niresaka taminy nandritra izany fotoana izany, dia hisy ny fotoana hiverenany ara-pientanam-po sy ara-batana.
Amin'izao fotoana izao, inona no tokony hataonao?
Ahoana no tokony hataonao?
Eny, aza tonga dia miverina amin'ireo fanontaniana miharihary toy ny antony nihatahany, izay tadiaviny ankehitriny fa tafaverina izy, ary mbola hataony indray ve.
Mety tsy azony antoka hoe nahoana izy no mahatsapa fa mila misintona, ka ny fiezahana hametraka azy hiteny amin'ny teny dia hiafara amin'ny loza.
Andramo aseho azy ny hafalianao amin'ny famerenany azy indray. Manehoa fitiavana ary ny fikarakarana.
Lazao azy ny fankasitrahanao manana azy amin'ny fiainanao indray.
Ataovy izay tianao hahatongavana amin'ny fiarahana: faly sy afa-po ary faly.
Aza manandrana manome vola azy amin'ny fomba nitondrany anao.
Eny, ampitao ny zavatra tsapanao, nefa ataovy tsy miandany na miabo amin'ny lafiny rehetra.
Fantatro fa mila toerana sy fotoana ianao hanaovana ny zavatra tianao manokana sy hanodinana ny eritreritrao sy ny fahatsapanao. Tsy maninona. Tsy mila mahatakatra aho, fa raha te hiresaka momba izany ianao izao na amin'ny ho avy dia vonona hihaino foana aho.
Manina anao aho tany. Maharary ny tsy fahitana anao matetika, fa matotra aho amin'ity fifandraisana ity raha toa ianao ka.
Mazava ho azy, raha manana fifandraisana lavitra ianao ary misintona matetika foana ny lehilahyo dia mety tsy mila miteny na inona na inona mihitsy ianao.
Fantaro fotsiny fa tsy ampahany mahazatra amin'ny fiarahana izany ary misokatra sy mandray tsara rehefa miverina aminao ara-pientanam-po ny vadinao.
Rehefa manalavitra ny tenany ny lehilahy, mandra-pahoviana izy no ‘tsy hisy’?
Mety ho andro vitsivitsy na herinandro izany. Mety ho lava kokoa io.
Ny tena fanontaniana tokony apetrakao amin'ny tenanao dia hoe mandra-pahoviana no vonona hiandry ianao.
Raha vao manomboka ny fifandraisanareo dia mety tsy ho vonona hiantehitra sy hihazona ny varavarana hisokatra ela ianao.
Fa raha lavitra amin'ny fifandraisana ianao, dia azonao atao ny misafidy ny hanome azy fotoana bebe kokoa hiadiana amin'ny fihetseham-pony.
Miankina tanteraka aminao izany.
Toy izany ve ny lehilahy rehetra?
Ny valiny fohy dia: tsia, tsy ny lehilahy rehetra no mahatsapa fa mila misintona fihetsem-po na ara-batana amin'ny sakaiza.
Saingy mahazatra izany.
Na ny fomba fampiasan-dehilahy fotsiny, mety tsy fantatsika mihitsy.
Rehefa misintona izy ireo dia mety ho sarotra ny mandray azy io, saingy antenaina fa ity lahatsoratra ity dia nanome anao torohevitra azo arahana ary nanampy anao hahatakatra ny toe-javatra iainanao.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao momba ny fihetsika nampihemotra an'ity lehilahy ity?Amin'ny toe-javatra toy ireny dia tena afaka manampy ny manome toro-hevitra iray avy amin'ny olona efa zatra mifanatrika amin'izy ireo fa tsy mandalo irery. Hihaino izay holazainao izy ireo ary hanolotra sosokevitra momba ny fomba hirosoana.Ka maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero mba hanampy anao hahafantatra ny zava-misy. Tsotra.
Famantarana 8 horaisina ho anao eo amin'ny fifandraisanao
Ahoana no hamantarana sy hiatrehana ny fanahiana amin'ny fifandraisana
ahoana no ahafantarana raha nandeha tsara ny daty voalohany
barry gibb sy linda fotsy
toerana aleha raha mankaleo anao
firy taona ny wwe superstars
ny fomba hiatrehana olona iray izay mametraka anao foana